January 2017 - Page 10 of 34 - Sawirrotv
January 24, 2017 – Dadka Aqoonta leh ee Soomaalida ah ayaa waxa ay u badan yihiin, dad Qurba joog ah oo haysta dhalashooyin dalal kale, hadaba su’aasha meesha taal ayaa waxa ay tahay, malaga yaabaa in dadka Madaxda ahi ay u cago juglayn karaan dalalka shisheeye ee ay baasabooradooda haystaan. Dhawaan ayay ahayd markii madaxda …
Madaxda Soomalida & Baasaboorka Ajinebiga (video)
Dhawaan ayay ahayd markii madaxda soomaalida ah qaar, siiba kuwa musuqmaasuqa ku dheereeya ay dadlalka reer galbeedka ugu baaqeen inay joojiyaan musuq-maasuqa ay ka dhex wadaan doorashooyinka dalka, kuwaasi oo ugu cagojugleeyey inay soo saari doonaan maxkamado ninkii musuq maasuq lagu helaa, inkastoo arintani ay tahay mid wanaagsan oo musuq-maasuqa lagu yaraynayo ayaa hadana waxa …
Ururka Al Shabaab oo Saakay Lagala Wareegay Degmeda Badhaadhe ee Gobolka Jubada Hoose
January 24, 2017 – Degmada Badhaadhe oo ku taalla gobolka Jubbada Hoose ayaa saaka waxaa la wareegay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo taageero ka helaya ciidamo Caddaan ah sida ay sheegeen Saraakiisha ciidanka dowladda. Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa laga saaray Degmeda, waxaana hadda si buuxda gacanta ku haya ciidamada maamulka Jubbaland. …
Markab Hub Lagu soo Dhex Qariyay oo Lagu Qabtay Magaalada Kismaayo
January 24, 2017 – Maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay markab siday bagaash ganacsi iyo alaabo kale, kaasi oo lagu soo dhex qariyay hub fara badan,waxaana markabkani uu u kireysnaa ganacsade caan ka ah magaalada Kismaayo. Markabkan oo ka diiwaan-gishan Magaalada Pretoria ee Caasimadda Wadanka South Africa, ayaa gelinkii dambe ee Axadii ku soo xirtay …
Gaarigii Qarxay Isagoo Meelyaal (VIDEO)
Sida wararku ay nagu soo gaarayaan, qaraxan ayaa lagu soo xiray gaari uu lahaa nin u shaqeeya Dowlada, waxa uuna qaraxu dhacay, xili ninkii gaariga lahaa uu meel baarkin ah gaarigiisa dhigtay kana degay. Ma jirto wax qasaaro ah oo ka dhashay qaraxaasi, waxaana qaraxan ka bad baaday ninkii la doonayay in lagu wax yeeleeyo, …
January 23, 2017 – Waarbaahinta dalka Maraykanka, kuwa Bidixda ah iyo Kuwa Midigta ah ba ayaa ayaa aad uga yaaban, xukuumadda cusub ee Donald Trump oo dhawaan xilka la wareegtay. Hadaba tan ugu sii daran ayaan ahayn been ka fakatay oo lagu qaldamay , maya waa been indhocadays caadi ah, iyadoo soomaalidu ay beentan oo kalu u taqaan …
Beentii Cadeyd ee Xukuumadda Trump (VIDEO)
Hadaba tan ugu sii daran ayaan ahayn been ka fakatay oo lagu qaldamay , maya waa been indhocadays caadi ah, iyadoo soomaalidu ay beentan oo kalu u taqaan (gacan Qorax ku Qaris) ama qof isku dayaya inuu gacantiisa qoraxda ku qariyo dadkana u sheego inaysan maanta qorax jirin. Waa arin aan weligeed ka dhicin barta …
Dagaalyahanadda Al Shabaab oo Markale Weerar Gaadmo ah ku Soo Qaaday Degmeda Afgooye
January 23, 2017 – Wararkii ugu dambeeyay ee Caawa ka soo baxaya dagaalo xoogan oo galabta ka dhacay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa sheegaya in ururka Al-shabaab ay Galabta Dagaal xoogan ku soo qaadeen degmeda Afgooye, ayna xaaladda degmeda caawa tahay mid la’isku hor fadhiyo. Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay weli ku sugan yihiin …